Fihaonana tamin’ny governemanta: mitaky ny hijerena ny aty vilanin’ny vahoaka ny depiote - ewa.mg
Fihaonana tamin’ny governemanta: mitaky ny hijerena ny aty vilanin’ny vahoaka ny depiote
News - Fihaonana tamin’ny governemanta: mitaky ny hijerena ny aty vilanin’ny vahoaka ny depiote
Nisy ihany ny nahitsy fiteny. Tao
koa ireo nivoaka niditra na koa naneho ny indro kely tamin’ny
fihaonana tamin’ny governemanta, omaly. “Sahirana ny vahoaka
amin’ny vilaniny… Sao tokony hanova ho any amin’ny lafiny sosialy
kokoa isika. Avelao aloha ny fotodrafitrasa…”, hoy ny depiote
avy amin’ny tsy miankina, Rafidimanana Narson, nanoloana ny
Praiminisitra Ntsay Christian, omaly. Nohitsiny fa tokony hatokana
any amin’ny sosialim-bahoaka ireny fanampiana ireny. Ilana
fifanatonana, anaty fanajana fepetra ny fifampiresahana momba
izany, araka ny nambarany. Takin’izy ireo koa ny hanomezana ny
volan’ireo orinasa nahazo ny tolobidy amin’ny
tsenam-baro-panjakana. Eo koa anefa ny tokony hanaraha-maso ny
asan’izy ireo eo amin’ny kalitao. Manampy izany ny hanafarana
vaksiny samihafa, hisafidianan’ny olona, ahafahana manala
tsikelikely amin’izay ny arovavaorona.
Tsy mandray antso
an-telefaonina ireo minisitra
Tsy nitsitsy fitenena koa ny
depiote hafa nilaza fa tsy mandray antso an-telefaonina ireo
minisitra, manoloana ny olana any amin’ny distrika misy azy ireo.
Eo koa ny tokony hanoloana na hamindrana toerana ireo
tompon’andraiki-panjakana sasany eny ifotony noho ny fomba fiasa.
“Tokony hifanaraka amin’ny hazakazaka ataon’ny filoha sy ny
praiminisitra ireny tompon’andraikitra ireny”, hoy izy
praiministra tamin’izany fa efa miasa ho amin’ny sosialim-bahoaka
ny fanjakana. Nanteriny fa mamorona asa, mitondra vola ho an’ny
orinasa na mpandraharaha izany ary vola any am-paosin’ny Malagasy.
“Hianjera indray ny sehatry ny BTP raha tsy manao
fotodrafitrasa isika”, hoy izy.
L’article Fihaonana tamin’ny governemanta: mitaky ny hijerena ny aty vilanin’ny vahoaka ny depiote a été récupéré chez Newsmada.
Vokatra rakikira :: Tazana miaraka amin’ ireo mpilalaon’ny Barea ny zanaky ny Filoha
Namoaka hira hoentina misaotra ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny Barean’ i Madagasikara ilay mpanakanto malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay, Sul-k, omaly. Tazana ao anatin’ny horonan-tsarimihetsika «Merci Barea !», an’ity mpanakanto ity ireo mpilalao roa lahy, isan’ireo nisongadina tamin’ny ekipampirenena malagasy : Abel Anicet Andrianantenaina (kapiteny) sy Nomenjanahary Lalaina na i Bôlida. Miaraka amin’izy ireo ary isan’ireo miseho matetika ihany koa ny zanaka lahimatoan’ny Filoha, Rajoelina Arena. Isan’ireo nampisongadina ny Barean’i Madagasikara ny fandraisana anjara voalohany tamin’ny fiadiana ny amboaran’ i Afrika (CAN 2019) notanterahina tany Ejipta. Na dia sambany aza izy ireo no tafita amin’ny dingan’ny famaranana dia tonga hatreo amin’ny ampahefa-dalana vao nifarana ny dian’izy ireo. Nanaitra an’ity mpanakanto ity ary itaomany an’ireo mpankafy baolina kitra rehetra izany vokatra tsara azon’ny Barea izany. «Hoentina hanomezam-boninahitra sy hankahery ny ekipam-pirenena malagasy iray manontolo sy ny kapiteny vaovao iny hira iny», araka ny voalazan’ity mpanakanto ity L’article Vokatra rakikira :: Tazana miaraka amin’ ireo mpilalaon’ny Barea ny zanaky ny Filoha est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – Fiakarana amin’ny «Can 2022»: mila mandresy an’i Niger ny Barea ary lavon’ny Elefanta i Etiopia
Hifantoka ao amin’ny kianja Barikadimy Toamasina avokoa ny sain’ny mpitia fanatanjahantena, indrindra fa ny baolina kitra, amin’ity talata ity. Miankina amin’ny lalaon’i Cote d’Ivoire sy i Etiopia koa anefa izany hiatrehana ny “Can 2022” na tsia ny Barea de Madagascar.Hotanterahina, anio talata tolakandro ao amin’ny kianja Stadium Barikadimy Toamasina, ny andro fahenina farany, hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022”, taranja baolina kitra. Fihaonana, hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Mena-n’i Niger. Efa samy any an-toerana avokoa ny ekipa roa tonta.Kihon-dalana ahalalana ny ho tohin’ny dian’ny Barea de Madagascar io lalao io. Misy tsindry goavambe eo amin’ny ekipa malagasy satria mila mandresy an-dry zareo Nigerianina mba hahazoana maka ny toerana iray ho an’ity vondrona K ity. Vonona tanteraka ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar ny handresy ireto Mena-n’i Niger ireto. Ambony ny toe-tsain’ireo mpilalao.Tsy hitsangatsangana ny Mena…Samy nilaza izany avokoa na i Nicolas Dupuis, mpanazatra, na ireo mpilalao. Nilaza ny mpilalaon’ny Mena an’i Niger fa tsy hitsangantsangana. “Haka fandresena na efa tsy manana herijika hiatrehana ny “Can 2022” intsony aza. Hanala vela rahateo ry zareo, efa resin’ny Barea, tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 2, tamin’ny lalao mandroso ny 19 novambra 2019.Mbola hiankina betsaka amin’ny lalaon’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire sy ny Walya-n’i Etiopia ihany koa anefa izany. Lalao hotanterahina amin’ity talata ity ihany koa ao amin’ny kianja Stade Olympique Alassane Ouattara, ao Abidjan. Raha mandresy ry zareo Ivoarianina ka tafavoaka ihany koa ny Barea, samy tafita ny roa tonta. Raha ady sahala fotsiny kosa ny azy ireo, mihintsana ny Barea na mandresy aza. Samy manana isa 10 ny Barea sy ny Walya, amin’izany. Ny lalao mivantana nifanandrinan’ny roa tonta no jerena ka eo no mahalavo ny Malagasy. TompondakaL’article Kitra – Fiakarana amin’ny «Can 2022»: mila mandresy an’i Niger ny Barea ary lavon’ny Elefanta i Etiopia a été récupéré chez Newsmada.
« Rallye virtuel »: tompondaka 2018 Ratsimbazafy Riry
Taorian’ny fanambarana ny isa ho an’ireo mpandray anjara tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara amin’ny « Rallye virtuel », taona 2018, voahosotra ho tompondaka i Riry teo amin’ny filaharana ankapobeny sy ny sokajy « 2RM ». Nahazo fandresena in-droa nisesy izy, tamin’ny fifaninanana nokarakarain’ny FSAM sy ny lalao farany « Final Round », ny volana novambra lasa teo. Marihina fa dingana miisa 7 no nifaninanana tamin’ity taom-pilalaovana ity ary niampy ny lalao fanokafana sy ny lalao famaranana. Ny isa azon’ny mpanamory nandritra izany no natambatra ka nahazoana ny vokatra farany. Manana isa 182 Ratsimbazafy Riry ary mitàna ny lohany. Ity farany izay teo amin’ny familiana ny fiara marika Citroen DS3 R3-MAX. Manaraka azy ao amin’ny laharana faharoa kosa Ralahy Hobimalala Andriantsaina, manana ny isa 156. Rakotobe Serge, fantatra amin’ny solon’anarana hoe Sergerktb no mamarana ny telo voalohany amin’ny filaharana ankapobeny izay manana isa 76. L’article « Rallye virtuel »: tompondaka 2018 Ratsimbazafy Riry a été récupéré chez Newsmada.
Andoharanofotsy: tratra ilay jiolahy nisandoka ho polisin’ny « Brigade criminelle »
Fahasahiana tsotra izao! Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny polisin’ny BC sakelika fahefatra (BC4) Anosy noho ny resaka fisandohana andraikitra sy ny fisolokiana ny jiolahy iray 29 taona.Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisin’ny BC, mpivady mipetraka eny Andoharanofotsy no voafitak’ity jiolahy mpisoloky ity. Ny 5 janoary 2021 lasa teo, sendra nisotrosotro teo amin’ny tsenan’izy mivady ity jiolahy ity. Nilaza fa polisy miasa ao amin’ny BC4 Anosy izy ka tsy nihambahamba izy nivady niresaka ny olana misy amin’izy ireo. Voasoloky tamin’ny alalan’ny MVola izy mivady ka notantaran’izy ireo tamin’ity polisy sandoka ity. Nasain’ilay jiolay ity nanoratra taratasy fitoriana teo no ho eo izy mivady tamin’io fotoana io ary nanome toky izy fa hotadiaviny ireo olona nisoloky ireo. Ny 6 janoary 2021 (ny ampitson’ny nifampiresahana), nilaza ity polisy sandoka ity fa efa hita ilay olona fa any amin’ny faritany no misy azy ka mila vola 2 hetsy Ar handehanana any amin’ilay toerana. Ny 7 janoary 2021, nilaza indray ilay polisy sandoka fa efa tratra ilay olona nosamborina fa mbola misy naman’izy ireo hafa karohina ka mila vola 130 000 Ar hanohizana ny fikarohana.Nahazoany vola anetsiny maro…Ny 8 janoary 2021, mbola naka indray vola 1 hetsy Ar tamin’izy mivady ity polisy sandoka ity fa hoe hanaovana sakafo sy saran-dalana hitadiavana ilay olona. Nanomboka tsy natoky ity polisy sandoka ity izy mivady ka nanapa-kevitra hanatona teny amin’ny polisin’ny BC4 Anosy nanamarina raha tena miasa ao tokoa ity jiolahy ity. Rehefa tonga izy ireo, nanontany ireo polisy miasa ao ary teo vao fantatr’izy ireo fa tsy tena polisy io jiolahy io fa nisandoka. Ny andron’io ihany, nametraka fitoriana ao amin’ny BC4 izy mivady. Tsy niandry ela ny polisy fa nikaroka avy hatrany ity jiolahy ity. Natao ny vela-pandrika niaraka amin’izy mivady ka tratra tao an-tranony eny Andoharanofotsy izy, omaly. Niaiky izy fa tena nisandoka ho polisy sy naka vola tamin’izy mivady.Jean ClaudeL’article Andoharanofotsy: tratra ilay jiolahy nisandoka ho polisin’ny « Brigade criminelle » a été récupéré chez Newsmada.
Nitrangana hain-trano teny Ilafy, omaly antoandro. Kilan’ny afo ny trano roa mitafo bozaka. Avotra ny entana tao amin’ny trano iray mitafo fanitso nifanila tamin’ireo trano roa ireo. Voalaza fa afo nolalaovin’ny ankizy tao amin’ilay trano tafo bozaka iray no niavian’ ny firehetana. L’article Hain-trano est apparu en premier sur AoRaha.
Bakalorea: hifarana ny 17 jolay ny fisoratana anarana
Hifarana ny 17 jolay ho avy izao ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an’ny fanadinam-panjakana bakalorea taona 2020, araka ny fanambaran’ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana Ambony, Rajaonarison Jean François, omaly. Aorian’ io fe-potoana io, tsy misy intsony ny fandraisana satria efa nohalavaina ny fisoratana anarana raha niantomboka ny 20 febroary lasa teo. Tsy niova ny saran’ny fisoratana anarana ho an’ny bakalorea amin’ity taona ity. Ho an’ny fampianarana ankapobeny, hanomboka ny 5 oktobra ary hifarana ny 9 oktobra ny bakalorea. Ho an’ny sampana teknika sy fiofanana momba ny asa andiany faharoa, hanomboka ny 12 oktobra ary hitohy ny 13 oktobra ny fanadinana. Hitsahatra ny 14 oktobra noho ny fanamarihana ny fetin’ny Repoblika I. Hiverina ny fanadinana ny 15 sy 16 oktobra.Ho an’ny fampianarana ambony, afaka mamita ny fandaharam-pianarana ny oniversite sy ny lalam-piofanana tsy mbola nahavita eo anelanelan’ny 19 oktobra sy ny 20 desambra. Tombanana ho ny volana marsa 2021 ny fisantarana ny taom-pianarana vaovao ho an’ny oniversite rehetra miankina amin’ny fanjakana. Miankina betsaka amin’ny fivoaran’ny raharaha ara-pahasalamana anefa ny lamina rehetra. Mbola hisy rahateo fivoriana miaraka amin’ny filohan’ny oniversite sy ny talen’ny sekoly ambony (Copries) hanapahana ny tetiandro farany.Vonjy L’article Bakalorea: hifarana ny 17 jolay ny fisoratana anarana a été récupéré chez Newsmada.
Rehefa avy nitety an’i Eoropa: hanolotra seho tokana eto ry Malagasy guitar masters
Sambany hiaka-tsehatra eto an-tanindrazana ny Malagasy guitar masters, hatramin’ny niandohan’ity taona ity. Ny alakamisy 25 jolay izao ny fotoana, etsy amin’ny Piment café etsy Behoririka, ao anatin’ny « cabaret », araka ny hetsika ahafantarana ity toerana ity. Azo lazaina ho miavaka amin’izay fampisehoana sy seho mozika, ny amin’io faran’ny herinandro io, ity.Tsy fahita matetika eto an-tanindrazana ny tarika, izay efa manana ny lazany any ivelany any sy mitety faritra maro. Araka ny fantatra, miisa 12 eo ho eo ny toerana notsidihin’izy ireo sy nanaovany fampisehoana, nandritra iny volana mey sy volana jona iny. Tsy nataon’izy ireo diso anjara ny mpankafy eto an-toerana, mandritra ny fandalovan’izy ireo eto.Raha tsiahivina, tarika ahitana mpikambana telo, samy havanana sy manana ny maha izy azy eo amin’ny fitendrena gitara, ny Malagasy guitar masters. Tsy iza izany fa i Teta, i Chrysanto Zama ary i Rija Randrianivosoa, izay nisolo an’i Joël Rabesolo. Ankoatra ny fitetezana firenena, efa namoaka rakikira, mitondra ny lohateny hoe « Volo hazo », ny tarika.Ny mampiavaka azy ireo, ny fahaizan’ny tsirairay mamoaka ny talentany sy mametraka ny « soniany », izay sady mifameno. Eo koa ny fahaizan’izy ireo mampifanaraka ny mozika malagasy amin’ny fironana ankehitriny. Fotoana iray ankafizana izany rehetra izany io amin’ny alakamisy io, izay inoana fa hahaliana ny maro. Landy R. L’article Rehefa avy nitety an’i Eoropa: hanolotra seho tokana eto ry Malagasy guitar masters a été récupéré chez Newsmada.
Nitohy, omaly, ary vao mainka nihanahery vaika ny hetsika fitakiana nataon’ny mpianatry ny Oniversiten’i Maninday, Toliara. Vokatry ny fifanjevoana, mpanao fihetsiketsehana iray namoy ny ainy, hoe maty voatifitra. Enina naratra, anisan’izany ny zandary roalahy…17 kosa nosamborin’ny mpitandro filaminana…Nihorohoro tanteraka, omaly, ny mponina ao Toliara nandritra ny tohin’ny hetsika nataon’ireo mpianatry ny oniversiten’i Maninday. Nitohy ny fihetsiketsehana nataon’ny mpianatra ary nihanahery vaika izany raha mitaha amin’ny afakomaly. Nanomboka maraina no efa nanao sakana toy ny fanaon’izy ireo ireto mpianatra mpanao fihetsiketsehana ireto. Efa nihatrana maraina koa anefa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana hanakanana ny fanelingelenana ataon’izy ireo. Nosakanana tsy hahazo miditra ao an-drenivohitr’i Toliara ireo mpianatra. Teo koa ireo andiany hafa nanao sakana tamin’ny alalan’ny sakana sy ny doro kodiarana. Nisy ny fifandonana ary somary nahery vaika aza izany, araka ny fanazavana voaray avy amin’ny solontenan’ireo mpianatra. Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fifandonan’ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana ka tsy nifarana izany raha tsy tamin’ny 3 ora tolakandro (omaly io). Ny mpianatra mitoraka, ny mpitandro filaminana kosa, nanapoaka grenady lakrimozena sady nanao tifi-danitra.Niala ny trano fonenany ireo mpampianatra…Vokany, mpanao fihetsiketsehana iray fantatra fa namoy ny ainy, hoe maty voatifitra nandritra ny savorovoro izy io. Tsy voamarina kosa anefa na anisan’ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana izy io na olon-tsotra ihany, araka ny voalazan’ny tompon’andraikitry ny oniversiten’i Maninday. Efa nalefa ao amin’ny Hopitalibe Toliara ny razana, omaly maraina ihany. Ankilany, olona enina naratra mafy ka anisan’izany ny zandary roa lahy tratran’ny tora-bato. Niampy 17 hafa indray ireo mpianatra voasambotra ankoatra ireo 18 efa tazonina anaovana fanadihadiana eny amin’ny zandary. Vao mainka nampiakatra ny hatezeran’ireo mpianatra izany ka niitatra tonga teny amin’ny faritra misy ny tranona mpampianatra ao Ankilahila Maninday ny fihetsiketsehana. Kilan’ny afo ka potika tsy nisy noraisina intsony tamin’izany ny tranona mpampianatra iray. Vokatr’izany, niala avy hatrany teny amin’ny faritra misy ny trano fonenan’ireo mpampianatry ny oniversite ny ankamaroan’ireo mpampianatra noho ny tahotra. Miato ny fampianarana eny amin’ny oniversiten’i Maninday…Manoloana ity zava-misy niafara tamin’ny fahafatesan’olona ity, nanao fanambarana ny filohan’ny oniversiten’i Toliara taorian’ny dinika niarahana amin’ny “conseil scientifique” omaly ka nampiato ny fampianarana manomboka anio mandra-pilamin’ny toe-draharaha eny Maninday. Nanamafy ireo mpianatra fa mbola hitohy ny hetsika ary vao mainka aza ho mafy no ho izao na inona na inona fepetra horaisin’ny fanjakana eo satria efa leo tanteraka mihitsy. Nanidy toeram-pivarotana avokoa ireo tranombarotra ao Toliara, nandritra ny hetsika nataon’ny mpianatra. Andrasana indray ny tohin’ny hetsika anio. Olana saro-bahana tsy ahitam-bahaolana matetika ity olana eny anivon’ny oniverisite ity.CMS/Jean ClaudeL’article Nitohy ny grevin’ny mpianatry ny oniversite Maninday: mpanao fihetsiketsehana iray maty voatifitra, 17 voasambotra a été récupéré chez Newsmada.
Nitohy teny amin’ny fitaleavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy (DREDD) Analamanga, ny 15 jona 2021 teny Nanisana, ny fanentanana ny fanaovana vaksiny Covid-19 ataon’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka. Rehefa avy nampahafantarina ny mpiasan’ny DREDD, ireo mponina eny amin’ny fokontany Nanisana maniry ny hanao vaksiny ny mombamomba ny vaksiny Covid-19 sy ny tombony azo avy amin’ny fanaovana izany dia niroso tamin’ny fanaovam-baksiny izy ireo. 60 olona teo no nataon’ny mpiasan’ny fahasalamam-bahoaka vaksiny tamin’io fotoana io. “ Izahay eto amin’ny fitaleavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Analamanga dia resy lahatra fa tokony atao ny vaksiny. Maromaro tato aminay no narary ary tratran’io forme grave io , ary nisy nandao fianakaviana. Narary taminay ilay izy dia tiana ialàna izay zavatra izay dia nanentana ny mpiasa izahay. Miara-miasa akaiky amin’ireo mponina ety ihany koa izahay, anisan’izany ny ato amin’ny fokontany Nanisana, ny distrika Avaradrano”, hoy ny Tale-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Andrianandrasana Herizo. Nambarany fa “ny fahasalaman’ny olona dia mifandray amin’ny fahasalaman’ny tontolo iainana”. “Hiatrika ady amin’ny afo izahay, isika ato ato. Ilaina salama ny olona, miara-miatrika an’izany ady izany mba hitondra mankany amin’ny fandrosoana lovain-jafy”, hoy izy. Miverina amin’ny fiainana andavanandro Ho an’ny faritra Analamanga, misokatra ho an’ireo olona 18 taona mihoatra maniry ny hanao vaksiny Covid-19 ireo toerana natokana amin’izany toy ny eny amin’ny Stade Malacam, Kianja fanaovana basket eny Anosisoa Ambohimanarina, ny “vaccinodrome” eo aorian’ny FJKM Salema vaovao 67ha… Mandray olona manomboka amin’ny 8 maraina ka hatramin’ny 4 hariva ireo toerana ireo. Araka ny fanazavan’ny Talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga, Raharimamonjy Laliarisoa fa afaka manatona ireo olona te hisitraka vaksiny: olona maromaro na orinasa, fiangonana, ministera, ihany koa ny mpiasan’ny fahasalamana. “Raha mihoatra ny 40 isa dia azonay atao ny manatona”, hoy izy. Manentana ny rehetra, indrindra ireo olona mihoatra ny 45 taona Ramatoa Raharimamonjy Laliarisoa hanao vaksiny satria “raha nahatsikaritra isika dia io sokajin-taona io no maro olona lavon’ny covid, maromaro amin’ireo forme grave”. Nohamafisiny fa ny “fanaovana vaksiny no lalana iray ahafahantsika miala amin’izao valanaretina izao, miala amin’ny fihibohana, miverina amin’ny fiainana andavanandro”. Marihina fa anisany nanolon-tena amin’ny fanentanana ny mpiara-belona hanao vaksiny i Haingo Pararadis. “Noho ny fahatsapana ny maha sarobidy ny aina dia resy lahatra fa ilaina ny fanaovana vaksiny ahafahana miatrika ny covid-19, tsy ahatongavana amin’ny forme grave. Amiko harena ny olona”, hoy ity mpilatsaka an-tsitrapo ity. Lynda A. Cet article VAKSINY COVID-19 : “Lalana iray ahafahantsika miala amin’izao valanaretina izao” est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article VAKSINY COVID-19 : “Lalana iray ahafahantsika miala amin’izao valanaretina izao” a été récupéré chez Délire Madagascar.
Fanohanana ara-tsakafo ny any Atsimo: maherin’ny 7 hetsy ireo mponina hampian’ny Amerikanina
Nanome vola mitentina efa ho 40 tapitrisa dolara ny governemanta amerikana ho fanampiana vonjy taitra ny any atsimon’ny Nosy. Natao hanomezana fanampiana ara-tsakafo ho an’ny olona maherin’ny 729.000 ity famatsiam-bola vaovao. Nivoitra tamin’ny fihaonan’ny filoha Rajoelina sy ny ambasadaoro amerikanina, i Michael Pelletier, omaly izany.Ahafahana manome fanampiana ara-tsakafo, hitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin’ny zaza madinika sy ny vehivavy bevohoka ary ny tera-bao, hanatsarana ny fahadiovana ary hanamboarana fantsakana hahazoana rano fisotro izany famatsiam-bola izany.Mpirahalahy mianalaNasongadin’ny ambasadaoro tamin’ny filoha fa miara-dia toy ny “mpirahalahy mianala” ny governemanta amerikana sy ny governemanta malagasy amin’ny fiatrehana ny filan’ny fianakaviana ianjadian’ny hanoanana sy ny fanomezana vahaolana maharitra amin’ny tsy fahalavorariana ara-tsakafo any atsimo sy atsimo atsinanan’i Madagasikara. Na izany aza, nanteriny fa na hitondra fanampiana ho an’ny olona maro aza io famatsiam-bola vaovao io ary hanome fahafaham-po ny filan’ny tsirairay izany. Nanao antso avo amin’ireo mpamatsy vola hafa izy mba hitondra anjara biriky. Anisan’izany ny firaisamonim-pirenena, mahatsapa ny hamehana amin’ny tranga any atsimo.Mitaky ezaka bebe kokoa Mila fandraisana anjara bebe kokoa anefa izany, araka ny nambarany. Maherin’ny iray tapitrisa ireo olona iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo ankehitriny ary mbola mety hihombo izany. “Manentana ny firaisamonim-pirenena sy ny fanjakana ny tenako hanao ezaka bebe kokoa hisorohana ny fihomboan’ny mosary”, hoy ihany izy. Notsiahiviny, araka ny fanadihadiana natao ny faran’ny mey teo fa manahirana ny toe-draharaha ara-tsakafo hatramin’ny nanombohan’ny haintany ny taona 2014. Vahoaka Tandidonin’ny mosary ny vahoaka ka ho ratsy ny vokatra ho avy, ary hiharatsy ny fahazoana sakafo amin’ny 2022.Synèse R. L’article Fanohanana ara-tsakafo ny any Atsimo: maherin’ny 7 hetsy ireo mponina hampian’ny Amerikanina a été récupéré chez Newsmada.
Rallye Asacm «Eau vive»: mpanamory 35 hiady ny ho lohany
Hotanterahina ny asabotsy 19 sy ny alahady 20 jona ho avy izao ny fifaninanana voalohany eo amin’ny fanamoriana fiarakodia. Rallye Asacm “Eau vive” no hisantatra izany. Mahatratra 35 ireo mpifaninana amin’ity. Anisan’ireo hifampitady i Mathieu sy i Rivo ary i Mika. Hisy dingana manokana “ES” miisa 9 ity rallye ity, mirefy 128, 52 km.Hiavaka ity hazakazaka ity satria hiverenana intelo avy ireo dingana manokana rehetra. Hotanterahina ny andro voalohany, ireo dingana manokana telo ka ny voalohany mampitohy an’Ambohimiadana sy Imerinavaratra, mirefy 13, 28 km. Aorian’izay, hamita Ankilemalema sy Ambatomanjaka, misy halavana 13, 46 km ireo mpifaninana rehetra. Hamarana ny andro asabotsy ny eo Anjezika sy Xt Mahavelona, mahatratra 16, 10 km, izay lava indrindra amin’ireo dingana manokana hatao. Hiverenana indroa avy kosa ireo ny andron’ny alahady.TorcelinIreo mpandray anjara 1-Mika – Fafah – (P.208T16) – TMF/Tacs2-Faniry – Ny Anjara – (P.206) – TMF/Asacm3-Antsa – Bemadad – (Toyota) – ACCT4-Olivier – Nath – (Citroen C2) – Asacm5-Freddy – Jimmy R – (Isuzu D-Max) – Ama/Asacm6-Anjabob – Mirindra – (Land Rover Defender) – Asa Tana7-Jeffy – Tsoupou – (P.206) – FMMSAM8-Nirina – Hery – (Polaris RZR 1000) – FMMSAM9-Manintona – Sedera – (P.106) – Asa Tana10-Rado Kely – Anjaraben – (Citroen Saxo) – MSA11-Damtam – Eddy – (P.205) – FMMSAM12-Jacques – Mijoro – (Mitsubishi Evo 7) – Asa Tana/Asacm13-Mika –MLR – (BMW E30) – FMMSAM14-Tsito – Tsiresy – (Mitsubishi Evo9) – Asacm15-Little M – Ipman – (Citroen Saxo) – SRK16-Daddy – Sitraka – (VW Golf MK2) – Asacm17-Aro Kiady – Fanja – (Citroen C2VTS) – Asacm18-Maika – Mann – (P.205) – Ama/Asacm19-No limit – Patblock – (Ford Ranger) – 110 As/FMMSAM20-Haja D – Elvis D – (Mitsubishi Lancer Evo 6) – TMF21-Hasnein – Seb – (Polaris Pro XP) – Ama/ACCT22-Rija – Tsitsi – (Mitsubishi Colt) – TMF23-Sitraka – Rado – (Subaru) – FMMSAM24-Koloina – Robby – (Citroen Saxo) – FMMSAM25-Hasina – Dinax – (Subaru GCB) – FMMSAM26-Hermick – Dads – (Citroen C2 R2) – Tasamm/Asa Tana27-Stenio – Alcazaria Jr – (P.106) – FMMSAM28-Titi – Kael – (Renault Clio 16 S) – Asa Tana29-Fred – Mick – (Subaru Impreza GDB) – Asacm30-Rivo – Ando – (Subaru Impreza) – FMMSAM31-Mathieu – MD – (Subaru Impreza) – Asacm32-Tahina – Ranto – (Subaruu Impreza) – Asacm/Asa Tana33-Patrick – Eric – (Subaru Impreza) – Asacm34-Fidy – Alain – (Renault Clio) – Asacm35-Pattie – Pipo – (Citroen Visa Trophee) – Asacm TorcelinL’article Rallye Asacm «Eau vive»: mpanamory 35 hiady ny ho lohany a été récupéré chez Newsmada.